တရုတ်စျေးသက်သာသောသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ကုန်လှောင်ရုံစက်ရုံထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | ဂန္ထဝင်အုပ်စု
1. ကျယ်ပြန့်သော span တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသော span များနှင့်အတူအလယ်တန်းကော်လံမပါဘဲ 36m အတွက်အများဆုံး span ရှင်းလင်းရေးအကွာအဝေးရှိနိုင်ပါသည်။
ဝယ်သူများ၏လိုအပ်ချက်များအရ FOB စတုရန်းမီတာလျှင် USD29 မှ ၆၅ ဒေါ်လာအထိတန်ဖိုးနည်းသောယူနစ်စျေးနှုန်း
(၄) သက်တမ်း ၅၀ ကျော်သက်တမ်းရှိသည်
၅။ သိုလှောင်ရုံများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော၊ တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီးငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ရေခံနိုင်မှုနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ကော်လံနှင့်ရောင်ခြည်များအတွက် 1. Q235, Q345 H ကိုအပိုင်းသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ
၄။ နံရံ / ခေါင်မိုးပြား - အလွှာတစ်သျှူးပြားသို့မဟုတ်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပြားတစ်ခု
၅။ ဝင်းဒိုးတံခါးများ၊ PVC၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၊
၆။ မိုးရေအတွက်သံမဏိပြားများ (သို့) သွပ်သွင်းထားသောသံမဏိပြားများနှင့် PVC ပြွန်များ